वर्षाका बेला चारैतिर प्राकृतिक सुन्दरता र हरियाली छाउँछ । साथै यो मौमसमा हावा र पानीले थुप्रै संक्रामक रोगलाई समेत निम्त्याउँछ । वर्षा याममा विभिन्न ब्याक्टेरिया पैदा हुन सहज हुन्छ । यो मौसममा बालबालिकालाई कीटजन्य र पेटसम्बन्धी रोग सबैभन्दा बढी देखिन्छ । लामखुट्टे, मुसा, झिँगा, टिक्स आदिको प्रकोप वर्षा याममै बढी हुन्छ । त्यसैले यो मौसममा हामीले उचित सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
बेलुकीको चार बजे अगावै मनपर्ने जर्सीमा सानाठूला बालक विराटनगरको सहिद रंगशालाको मैदानमा भेला भइसकेका हुन्छन् । गुरुहरूको निर्देशनअनुरूप उनीहरू लामबद्ध हुन्छन् । व्यायाम गर्छन् । फुटबलको अभ्यासमा जुट्छन् । तिर्खाएपछि झोलाबाट बोतल झिक्दै पानी पिउँछन् ।
काग काँकाँ गरेर कराउँदै थियो । ढुकुर आफ्ना अण्डा छोपेर बसेको थियो । कागको आवाज सुनेर ढुकुरलाई दिक्क लाग्यो । उसलाई भोक लागे पनि उडेर अन्त जान सकेको थिएन । ऊ कोइलीको आवाज सुन्दा आनन्द मान्ने गथ्र्यो । आज कागको आवाजले चाहिँ उसलाई ज्वरो आएजस्तो भयो ।
साथीहरू हो ! तिमीहरूले टाइटनिकको बारेमा सुनेका छौ ? सुनेका भए राम्रो । नसुनेका भए म तिमीहरूलाई छोटकरीमा बताउँछु है त । सन् १९१२ मा बनेको संसारकै सबभन्दा ठूलो पानीजहाजको नाम हो टाइटनिक ।
मैले पढ्ने कापीकिताबबोक्छ मेरो झोला,यही झोला बोकी म ततर्छु जिन्दगीको खोला ।
मेरो घरअगाडि छ फराकिलो खाली ठाउँछेउछाउमा डिल भएको आँगन हो त्यसको नाउँ ।
हरियो भो सेरोफेरो लागेपछि ठूलो झरी,लटरम्म तरकारी छन् घरका बारी–कान्लाभरि ।
पोखरामा १२ औ संस्करणको लिटिल कास्की च्याम्पियन २०७५ आयोजना गरिएको छ । प्रतियोगितामा कास्की लेखनाथ गगनगौडाकी प्रीति पुन च्याम्पियन बन्न सफल भइन् । ज्ञानज्योति स्कुलमा अध्ययनरत १२ वर्षीय प्रीतिले अन्य २० प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै उपाधि जित्न सफल भएकी हुन् । उपाधि जितेपछि प्रीतिले सफल डान्सर बन्ने आफ्नो सपना रहेको बताइन् ।